Text muhiim ah markii uu tirtiray ka telefoonka si qalad ah waxay keeni kartaa dhibaato aad u weyn oo aad u. Mararka qaarkood ka telefoonka aad lumiso fariimaha qoraalka ah halka la xariirta nidaamka qalliinka aad iyo aad ugu fikirin waxaad naftaada caawin kara. Wondershare Dr.Fone Yimaado xal kaamil ah si aad u hesho telefoonka gacanta diiwaanka farriin qoraal ah. Maqaalkani waxa uu sharaxayaa sida aad u soo kaban kartaa fariimaha qoraalka ah tirtiray ka telefoonka iyo sida loo soo telefoonka ka heli diiwaanka farriin qoraal ah.
Qeybta 1: Ka soo xiriir taariikhda ka bixiyaha adeegga
Qeybta 2: Ka tirtiray fariimaha qoraalka ah ka iPhone / Android phone
Hel taariikhda la soo xidhiidhaan adeeg bixiyaha
Taariikhda xiriirada la raadsan karaa codsato adeeg bixiyaha. Si kastaba ha ahaatee, iyagu ma ay kaydiso wax content fariin qoraal ah, oo kaliya taariikhda, wakhtiga iyo lambarka taleefanka ee fariin qoraal aad. Waxaad u baahan tahay si aad u gudbiso codsi la daryeelka macaamiisha ah ee shirkadaha ka. Waxay kuu soo diri doonaa foomka in la buuxiyo oo nootaayo 2 todobaad gudahood. Sida ugu dhakhsaha badan ay u heli qaab xubinta ka buuxiyeen oo nootaayo, ay soo saaraan hore 3 bilood ee taariikhda fariin la socdaan faahfaahinta iyo u soo dir codsadaha ah 7 ilaa 10 maalmood ee soo socda.
Si aad u soo kabsado dhab content fariin qoraal ah, oo ay ku jiraan qoraalka lifaaqyada sida videos, music ama image files, waxaad tagi kartaa habab kale oo sanaanayaa faahfaahin qoraal iyo taariikhda, in badan yihiin lagu qanci karo, dhakhso ah, oo sax ah.
Marka fariin waa la tirtiraa qalabka, waxa aan la tirtiray isla. Fariimaha qoraalka ayaa la socoto ku lifaaqan ma overwritten, laakiin dhab ahaantii qarsoon. Nidaamka qarsado, oo waa la si fiican u baxey karaa iyadoo la kaashanayo this mid ka mid ah nooc ka mid ah, software la yaab leh ugu baaqay Wondershare Dr.Fone ah.
Ka tirtiray fariimaha qoraalka ah ka iPhone / Android phone
Waxaan helaan farriimaha qoraalka ah dhowr maalin kasta, oo wax badan oo ka mid ah waa dhiirrigelin fariimaha. Ugu dambayntii, waxaan horumariyo caado ah oo iyaga la tirtiro in badan. Si kedis ah waxaad ogaatay in fariin qoraal ah muhiimadda ugu weyn ah ayaa la tirtiray. Waxaa jiri kara ku lifaaqan oo fariin qoraal ah oo kale clips audio, video ama sawiro ah. Mararka qaarkood in geeddi-socodka wayn Fadilid software ama ay sabab u tahay sidoo kale OS kharribeen, aad lumiso qoraalka.
Sidaas, uma baahnid inaad si argagixin maadaama ay jiraan siyaabo dib u soo ceshano fariimaha qoraalka ah ee aad. Iyadoo Wondershare Dr.Fone, aad heshay hab hadda qasi aad qalad. Waxaad dib u heli kartaa farriin qoraal ah adiga oo aan wax dhibaato ah.
Dr.Fone waxaa laga heli karaa labada Android iyo macruufka. Waa nicmo ah dadka galaan dhibaatooyin ka, kuwaas oo si joogto ah. Waxaad soo kaban karto, ku dhowaad aan wax walba oo kaliya qoraalka, taas oo aad ku lumay telefoonka. Tani software kabashada xogta kaa caawin kara inaad hesho macluumaadka ugu qiimaha badan. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa inay raacaan talaabooyinkan sadexda ah si fudud.
Wixii Android Devices
Talaabada 1: Isku qalab aad
Hadda waxaad u baahan tahay in hab awood debugging USB, si toos ah isku xiro qalabka Android aad PC. Hab Tani waxay ka caawisaa Dr.Fone si aad u ogaatid in aad telefoonka oo kuu ogolaanaya in aad la dhiso xiriir ah hawlgalka Iana.
Tallaabo 2: Ku bilow scan
Ka dib markii qalab Android aad ayaa loo aqoonsaday, waxaad bilaabi kartaa la socodka ah ee baar ah fariimaha qoraalka ah la tirtiro.
Fiiri sanduuqka hor 'Fariin' in ay doortaan kabashada farriimaha kaliya. Si looga fogaado xeel dheer ee fariimaha ka dhowr files iyo waqtiga waa in aad doorato sanduuqa fariin halkii kaliya badan xulashada dhan badbaadiyo.
Waxaad bilaabi kartaa iskaanka midkood xulashada "Sawirka waxyaabaha masaxay" ama "Sawirka faylka oo dhan". Haddii aadan hubin fariin qoraal aad raadinayso ah, gaar ahaan "masaxay" qaybta, iskaan kartaa dhammaan faylasha. Waxaa jira hab sare ee baadhi karo in loo isticmaali karaa raadinta gaar ah. Waxay qaadan kartaa waqti, taas oo ku xidhan nooca file, goobta, iyo baaxadda.
Talaabada 3: ceshano Data
Hadda Dr.Fone bilaabi doona baaritaan faahfaahsan oo soo duuli doonaa liiska natiijada. Dr.Fone Kuu ogolaanaya in aad ku eegaan qoraalka la tirtiray ka hor inta aadan soo celin ama ka soo kabsadaan.
Waxaad dooran kartaa fariimaha qoraalka ah ku hammin ka mid ah liiska guji si "Ladnaansho".
Wixii qalabka macruufka
3 siyaabood inuu ka soo kabsado Messages ka iPhone 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS!
Si toos ah soo kabsado fariimaha ka iPhone, gurmad Lugood iyo gurmad iCloud.
Ceshano farriimo ay ka mid yihiin tirada, magacyada, emails, horyaal shaqo, shirkadaha, iwm
Talaabada 1: Isku qalabka
Bilow ku xira qalab macruufka la your computer si aad bilaabi kartaa raadinaya ah fariimaha qoraalka ah laga badiyay oo dhan.
Dr.Fone Hadda ku weydiin doonaa inaad saaray qalabka hab DFU. Si taas loo sameeyo si fudud u qabtaan iyo Xukun iyo Home badhamada isku mar muddo 10 ilbiriqsi ama si, ka dibna, kaliya sii daayo button Power iyadoo button Home sii adkeeyey ka.
Si aad u bilaabaan baaritaan, si fudud ku dhuftay ikhtiyaarka ah 'Start Scan'. Marxaladani waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo ku xidhan xog ku saabsan qalab aad. Xusuusnow in aad xataa ku xasil karo habka iskaanka ah, haddii aad ka heli file aad inta ay socoto raadinaya.
Dooro ikhtiyaarka ah Messages ka alaabta ku qoran liistada la baadhay, dhanka bidix ee shaashadda. In muddo ah, screen waa in ay muujiyaan oo dhan la xiriira fariin qoraal files si aad u.
Waxaad arki kartaa iyo xog jirta ee shaashadda tirtiray. Demi on ikhtiyaarka 'muujiyaan oo kaliya waxyaabaha tirtiray' si ay u soo bandhigaan oo kaliya kuwa la tirtiro. Hadda, waxaad dooran kartaa farriin qoraal aad rabto in aad baxey ah.
Waxa kaliya ee ay hadda u samayn hadhayna waa in riix 'Ladnaansho' button dhinaca gacanta midigta hoose ee shaashadda si ay u kaydiso qoraalka iyo lifaaqyadu on your computer ama in qalabka.
> Resource > iPhone > Sida loo macruufka ka hesho xogta fariin qoraal / telefoonada Android